भारतिय च्यानलहरु बन्द भएपछि मधेशमा आक्रोस बढदै, जनकपुरधाममा प्रदर्शन
जनकपुरधाम, असार २५ : नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम डिसहोम नेपालले भारतको न्युज च्यानलहरु बन्द गरेपछि असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । जनकपुरधाममा समाजवादी पार्टीका युवाहरु तथा भातृसंगठनका युवाहरुले सञ्चारमन्त्रीको खडो आदेशमा विदेशी च्यानलहरु बन्द गरेको विरोधमा जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेको छ ।
उनीहरुले नेपालका जनताहरु नेपालमा मात्र नभई भारत सहित विश्वभरि छरिएकाले कुनै पनि सञ्चारको हक खोस्न नहुने भन्दै नेपाल सरकारको यो निति निरंकुश शासनको उदाहरण रहेको बताए । आफुहरुले हेर्दै आएको च्यानलहरु पुनः प्रशारण नभए डिशहोमलाई बहिष्कार गर्ने र यहाँको विक्रेताहरुका साथै अधिकृत विक्रेताहरु सवै शाखाहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले डिशहोम मुर्दावाद नेपाल सरकार मुर्दावाद निरंकुश शासन बन्द गर सहितका नाराहरु लगाएका छन् । उनीहरुले सरकारको हरेक गतिविधी जनता विरोधी रहेको र निरंकुशता लाद्दन चाहेको समेत बताएका छन् ।
भारतिय न्युज च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय
विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) हरुले भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नेपालमा बन्द गरेका छन् । च्यानल वितरकहरुले बिहीबार साँझदेखि सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शनबाहेक सबै भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय भएको मेगा म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले बताए । स्रोतका अनुसार सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय टिभी च्यानलहरुले नेपालका बारेमा अतिरन्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहेको र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा चिनिया राजदूतको नाम जोडेर आपत्तिजनक विषयहरु प्रसारण गरेपछि ती च्यानलहरु नेपालमा नदेखिने बनाइएको शर्माले बताए । तर इन्टरनेटबाट आउने सामग्री रोक्न सरकारले नीति नल्याएसम्म चाहेरमात्र भारतीय च्यानलको प्रसारण रोक्न सकिन्न उनको भनाई छ ।
सरकारले क्लिन फिड लागु गर्नुअघिनै इन्टरनेटबाट अनाधिकृत रुपमा आउने भिडियो कन्टेन्टहरु रोक्न एमएसओहरुले आग्रह गरिरहेका छन् । केबल अपरेटरहरुलाई सरकारले आग्रह गर्दा जुनसुकै बेला विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्न सक्छ । डिसहोम,मेगा म्याक्स, डिएसएन, मेरो टिभीलगायतका अपरेटहरुले साम”हिक रुपमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । म्याक्स टिभीका शर्माले अब सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट आउने भिडियो कन्टेन्टहरुको मुहाननै बन्द गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताए ।
अशोक दत्तको ‘राग तान’ मैथिली गीत सङग्रहको बिमोचन, गायिका साहको गीत पनि सार्वजानिक
मुसहर समुदायका चिसो प्रभावितलाई प्रहरी श्रीमती संघको न्यानो राहत
अख्तियार कार्यालय बर्दिवासको आफनै भवन सञ्चालनमा, आयुक्त डा.गुरुङ्गले गरिन समुदघाटन
बलिदानी दिवसमा थरिथरिको कार्यक्रम, आन्दोलनकारी युवाको बेग्लै जमघट
लहानमा डा. सिके राउतको गर्जन, कुन नेता कस्तो साँप ? यस्तो छ राउतको बर्गिकरण
मुख्यमन्त्रीले भने शहिद परिवारलाई बिर्सन सक्दैनौं, चुनावले नडराएको नेता झाको भनाई